I-Huawei P Smart Z isungulwe ngokusesikweni eSpain | I-Androidsis
I-Huawei P Smart Z isungulwe ngokusesikweni eSpain
Umgangatho ophakathi ophakathi ku-Android ufumana iindaba ezininzi kule meko. Kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo bekusemthethweni ukumiliselwa kwe-Honor 20 Lite eSpain. Ngoku lithuba lefowuni entsha yeHuawei kule meko. Le yiHuawei P Smart Z, I-smartphone ebesikwazi ukuyazi kutshanje, ifowuni yokuqala yohlobo lwesiTshayina ngekhamera ebuyisekayo.
Ifowuni ngoku engena ngokusemthethweni kwimakethi yaseSpain. Ukuqaliswa kwale Huawei P Smart Z eSpain kubhengeziwe ngokusemthethweni. Okwangoku ungayithenga kwiwebhusayithi yophawu, akukho mihla inikiweyo kwezinye iivenkile.
Ifowuni ithiwe thaca njenge ukhetho olulungileyo kweli candelo lentengiso. Uyilo lwangoku, ibhetri enkulu kunye neekhamera ezilungileyo, eziyinto ebaluleke kakhulu kweli candelo lentengiso. Ke isishiya sineemvakalelo ezilungileyo. Yahlala isaziwa ixabiso layo eSpain. Into esele siyazi.
Abo banomdla kwi Le Huawei P Smart Z kuya kufuneka ihlawule i-279 euro kwifowuni. Ixabiso elifanelekileyo lale modeli, likhutshwa kuqwalaselo olunye lwe-RAM kunye nokugcinwa kwangaphakathi. Singayithenga ngemibala emithathu esiyibonileyo kwinkcazo yayo: luhlaza okwesibhakabhaka, mnyama nokumnyama.
Okwangoku, abo banomdla wokuthenga le Huawei P Smart Z eSpain banokwenza njalo kwiwebhusayithi yayo esemthethweni. Ukuphehlelelwa kwezinye iivenkile, kuya kwenzeka kule veki okanye kule izayo. Nangona uphawu alusixelelanga nto malunga noku. Kungenzeka ukuba kwiiyure ezimbalwa ezizayo baya kusinika ulwazi ngakumbi malunga nezicwangciso zabo zokuphehlelela.
Imodeli entsha apho iHuawei ifuna ukugcina umzuzu wayo olungileyo kwimarike. Ukuthengiswa kwegama laseTshayina kunyuke kakhulu kwikota yokuqala yonyaka, ngokunyuka kwama-50%. Iifowuni ezinje ngale Huawei P Smart Z ziqinisekile ukunceda ukugcina lo mzuzu ulungileyo kwinkampani.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-Huawei P Smart Z isungulwe ngokusesikweni eSpain
Uvavanyo lweHuawei P30 VS P20 Pro: Amandla esignali yeWifi, isantya seWifi kunye nememori yokufunda kunye nesantya sokubhala
I-Honor 20 Lite isungulwe ngokusesikweni eSpain